Isitatimende Sabezindaba (Zulu)
Thina siyizinhlangano ezibalwe ngezansi siyakuhlaba siyakuhlikiza ngawo wonke amandla ukuhlasela kwabashokobezi okwenzeke edolobheni laseNdiya e-Mumbayi.
Ukungakhathaleli izimpilo ezimsulwa nembhubhiso edalwe yilezizenzo zodlame ezingenamqondo, kuyisenzo samanyala esingasoze saxoleleka. Asikho isizathu nomqondo okungabikwa ngaleziya zenzo ezimbi, ngisho bekungaba yisiphi isisusa noma imbangela. Ayikho inkolo ekhuthaza noma evumela udlame kubantu abamsulwa: kanti futhi ngokulinganayo, ayikho inkolo engabekwa icala ngodlame olwenziwe ngabantu bambe.
Kunokukhathazeka okukhulu ngokuthi kungenzeka lesisimo senyukele odlameni lomphakathi. Ngakho-ke akumele kubhebhethekiswe amalangabi enzondo, noma avunyelwe ukubhubhisa umoya woxolo kuleliyazwe.
Sidlulisa ukudabuka kwethu okukhulu nenduduzo emindenini yalabo abakhahlamezekile kuloludlame kanye noluntu lonke lwaseNdiya. Ukukhathazeka kwethu nemiqondo yethu kukulabo abahlukumezekile, ngaphandle kokugxila okholweni nasebuzweni ngalesisikhathi esinzima. Njengoba isizwe silila, nathi futhi siyalila sinokuthukuthela ngalesisehlakalo. Sithandazela ukuba kuvunguze umoya wokujula ngokomqondo, nokuthi usizi kanye nentukuthelo kungavuleli amasango abheke kolunye udlame olungenamqondo.
Siyanxusa ukuba izigilamkhuba kanye nabaphehli baloludweshu basheshe bafakwe amasongo kaS'gonyela, ngisho bangaba ngobani. Sinxusa uHulumeni waseNdiya ukuba aphuthume ukuvimba noma yiluphi udlame olungavela lubhekiswe kunoma yimuphi umphakathi. Sinxuse yonke imikhakha yemiphakathi ehlukahlukene yaseNdiya ukuba isebenzisane ngokubambisana okunokuthula ukuvimba isizwe ukuba singaweli ekungabusekeni.